मृत्यु दण्ड पाउनै लाग्दा आमालाई यस्तो चिठी, जसले संसार रुवायो | rochak nepali khabarside
मृत्यु दण्ड पाउनै लाग्दा आमालाई यस्तो चिठी, जसले संसार रुवायो
एजेन्सी । मृत्यु दण्ड पाएका एक युवकले आफनो अन्तिम इच्छाको रुपमा आफनो जन्म दिने आमालाई सम्बोधन गरेर चिठी लेखेका छन् । मुत्युदण्ड पाउनै लाग्दा त्यो चिठ्ठी आफ्नो आमालाई भनेर जेलको गार्डलाइ दिनु भनेर दिए । जुन चिठी संसार मन दुखाउन बाध्य बनाएको छ । यस्तो चिठी थियो आदरणिय आमा ! यदी यो संसारमा यो भन्दा पनि बढी न्याय छ भने, म मात्र नभएर हामी दुवैजनालाई मृत्यु दण्ड दिइनु पर्छ ।
मैले जुन किसिमको जीवन अंगाले,त्यसमा तिम्रो पनि त्यतिकै दोष छ्र मैले एकजना केटाको साइकल चोरेर घरमा ल्याएको तिमीलाई याद छ ? बाबुले नदेखोस् भनेर तिमीले त्यो साइकल लुकाउन मलाई मदत् गरेका थियौ मैले हाम्रो छिमेकिको गोजिबाट पैसा चोरेको तिमीलाई सम्झना छ ? त्यो पैसा लिएर मसंगै तिमी पनि शपिंग मल गएका थियौ मैले बाबुसंग झगडा गरेको पनि तिमीलाई याद होला । उ मलाई सपार्न चाहन्थ्यो, कारण मैले प्रतियोगिताको अन्तिम नतिजा नै चोरेर लगेको थिए र म निष्काषनमा परेको थिए ।
शुरुमा म अरु जस्तै साधारण बच्चो त थिएँ, त्यसपछि म फटाह किशोरमा परिणत भए अहिले म असाध्यै बिक्रित ब्यक्ति भाको छु । आमा, म त त्यतिबेला बच्चै थिए म सप्रिन सक्थें, तर तिमीले मेरो कुक्रित्यमा सहमति जनाउँदै गयौ । जे हुनु भैगयो तिमीलाई माफ दिन्छु संसारभरिकै आमा बाबुहरुको हातमा यो चिट्ठी पुगोस भन्ने म चाहन्छु । साभार नेपाल संदेश बाट
Admin28:34:00 AM